ပါဠိ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ပါဠိဘာသာစကား မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ပါဠိ (Pāli) ဟူသည် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းလူမျိုးတို့၏ မိခင်ဘာသာစကားတစ်မျိုးဖြစ်၏။ ဤဘာသာစကားကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာမှုပြုကြရာအကြောင်းအရင်းခံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အဖိုးတန်စာပေများဖြစ်သော ပိဋကတ်သုံးပုံကို ပါဠိဘာသာဖြင့် စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘီစီ ငါးရာစုမှ တစ်ရာစုထိ
ပုံ၏အပေါ်ဘက်ခြမ်းသည် ဒေ၀နာဂါရီတွင် သက္ကတဘာသာဖြင့် ရေးသားပါရှိသော ဗိဿနိုးသို့ဆုတောင်းစာဖြစ်ပြီး ပုံ၏အောက်ခြမ်းမှာ မြန်မာပြည်မှ ရသော ကမ္မဝါပရိတ်ပါဠိတော်ဖြစ်သည်။
၁ မူလဇစ်မြစ်နှင့် ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပုံအဆင့်ဆင့်
၁.၂.၁ မြန်မာနိင်ငံရှိ အယူအဆ
၂.၂ သရ (၈) လုံး
၂.၃ ဗျည်း ၃၃-လုံး
၂.၄ ဝဂ်ဗျည်း ၂၅ လုံး
ပါဠိဟူသော စကားလုံးကို ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လေ့လာသူများအကြား ပါဠိဆိုသည့် စကားလုံး၏ အနက်ကိုဖွင့်ဆိုပုံခြင်းမတူသကဲ့သို့ ထိုစကားလုံးကို စာလုံးပေါင်းပုံခြင်းပင် မတူညီကြပါ။ R. C. Childers က ပါဠိဟူသည် "အစဉ်" ဟု အနက်ဖွင့်သည်။
ပါဠိဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်၍ အနီးစပ်ဆုံးတွေ့ရှိရသော သမိုင်းအထောက်အထားမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိ ဂူဂျာရတ်ဒေသမှ အသောကမင်းကြီး၏ ကျောက်စာတိုင်များဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ် ဘီဟာပြည်နယ်နေရာဝန်းကျင်တွင်ရှိခဲ့သော ရှေးခေတ်မဂဓတိုင်းတွင် ဒေသခံတို့ပြောကြားသော အခြားဘာသာစကားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ၍ ပါဠိဘာသာစကား၏ တည်ရှိခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ခေတ်လယ် အင်ဒို-အာရိယန် ဘာသာစကား တစ်ခုဖြစ်သော ပါဠိသည် သက္ကတဘာသာစကားနှင့် မတူကွဲပြားသည်။
ဤsectionကို ဝီကီစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အကယ်၍သင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါက ဤsectionအား တိုးတက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွင် အကြံပေးမှုများ ပါဝင်လိမ့်မည်။
ပါဠိဘာသာ၏ မူလအခြေတည်ရှိရာဌာနလည်း သက္ကတဘာသာမှာကဲ့သို့ပင် အိန္ဒိယပြည် ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယပြည်တွင်လည်း မဂဓတိုင်း၌ ပြောဆိုသုံးစွဲသော ဘာသာဖြစ်၍ ယင်းကို မာဂဓဘာသာ ဟုခေါ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမပေါ်သောဘာသာဖြစ်၍ မူလဘာသာ ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ ထိုမာဂဓ မူလဘာသာကို ကမ္ဘာဦးသူတို့သည် လည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မာတို့သည်လည်းကောင်း၊ သူတစ်ပါး စကားကို မကြားရသော ကလေးသူငယ်တို့သည်လည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရားတို့သည်လည်းကောင်း ပြောဆိုသုံးစွဲကြ သည်ဟု ကျမ်းဂန်များ၌ ပြဆို၏။ ယင်းသို့ ကမ္ဘာဦးအခါမှစ၍ အစဉ်အလာသုံးစွဲ၍ လာခဲ့သော ထိုပါဠိဘာသာသည် အပြစ်ဒေါသတို့မှ လွတ်ကင်း၍ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောဘာသာစကားရင်းဖြစ်၏။ ဘာသာစကားတို့တွင် အချို့အချို့သော ဘာသာစကားတို့၌ အက္ခရာတွေသာ များပြီးအနက် အဓိပ္ပာယ်ကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ အသိခက်သော အနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိခြင်း၊ ပြည့်စုံသောဝေါဟာရမရှိခြင်း၊ ဝိသဇ္ဇနီသံများခြင်း၊ နှာခေါင်းသံလွှမ်းမိုးခြင်း၊ မပီပြင်သော အက္ခရာသံရှိခြင်း၊ အသံထွက်ကြမ်း တမ်းခြင်း၊ အက္ခရာဗျည်းအလွန်များခြင်း၊ သို့မဟုတ် အလွန်နည်းပါးခြင်း စသောချွတ်ယွင်းချက်များ အသီးသီးရှိနေ ကြသည်။ ပါဠိဘာသာကား ဤချွတ်ယွင်းချက်မျိုးမှကင်းစင်၍ သဒ္ဒါအားဖြင့်လည်းကောင်း အနက်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည့်ဝ၍ သာတ္ထ သဗျဉ္ဇနဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသော ဘာသာကြီး တစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
ယင်းသို့ သာတ္ထ သဗျဉ္ဇနဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့် ဘုရားမုခပါဌ် ပရိယတ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သော ဘာသာဖြစ်၍ ပါတိ ရက္ခတိီတိ ပါဠိဟူသော ဝစနတ္ထနှင့်အညီပါဠိ ဟူ၍ခေါ်ဆိုရသည်။ ထိုပါဠိဘာသာ၏ အရေးကြီးပုံကို ဝိနည်းဘက် ဆိုင်ရာသို့ရောက်လျှင် အလွန်ထင်ရှား၏။ ထိုစကားမှန်၏။ ရှင်ပြုခြင်း၊ ဥပသမ္ပဒကံဆောင်ခြင်းစသည်တို့ကို အခြား ဘာသာမျိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်၍ ထိုကံများအောင်မြင်ပြီးမြောက် နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပဲ ပါဠိဘာသာဖြင့် စည်းကမ်းကျနစွာ ရွတ်ဖတ်ဆောင်ရွက်မှသာ ထိုကံများအောင်မြင်ပြီးမြောက် နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ပြင် ဤကမ္ဘာအတွင်း၌ ပွင့်တော်မူ ကြကုန်သော ကကုသန်အစရှိကုန်သော ဘုရားတို့သည် လည်းကောင်း၊ ရှေးရှေးသောကမ္ဘာတို့၌ ပွင့်တော်မူကြကုန် သောဘုရားတို့သည်လည်းကောင်း၊ ထိုပါဠိဘာသာဖြင့်သာလျှင် ကျွတ်ထိုက်သော ဝေနေယျသတ္တဝါတို့အားတရား ဓမ္မညွန်ပြ ဟောကြားတော်မူကုန်၏။ အကျွန်ုပ်တို့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည်လည်း ဝေနေယျသတ္တဝါတို့အား တရားရေအေး တိုက်ကျွေးဝေငှ ဆုံးမတော်မူသောအခါတို့၌ ထိုပါဠိဘာသာဖြင့်သာလျှင်ဟောကြား ညွှန်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပေ၏။ နောက်နောင်ပွင့်တော်မူမည့်ဘုရားရှင်တို့သည်လည်း ထို ပါဠိဘာသာဖြင့်သာ တရားဓမ္မညွှန်ပြ ဟောကြားတော် မူမည်ဖြစ်ကုန်၏။ ပိဋကတ်သုံးပုံဖြင့်ရေတွက်အပ်သော ပရိယတ္တိဓမ္မကို သံဂါယနာ တင်တော်မူကြကုန်သော အရှင်မဟာကဿပ အစရှိကုန်သော အရှင်မြတ်တို့သည်လည်း ထိုပါဠိဘာသာဖြင့်သာ သံဂါယနာတင်တော်မူကြကုန်၏။ ပါဠိဘာသာဟူသည် ကျယ်ဝန်းခမ်းနား၍ အလွန်သိမ်မွေ့သောဘာသာရပ်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပုဒ်နေပါဌ်ထား ကံကတ္တာားစသည် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ရပုံစသော နည်းနာနယတို့ကို ပြဆိုသော သဒ္ဒါကျမ်းစသောကျမ်းပေါင်း မြောက်မြားစွာကို ရှေးပညာရှိကြီးများရေးသားပြုစုထားတော်မူခဲ့ ကြပေသည်။
ဤပါဠိဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အနော်ရထာ မင်းစော လက်ထက်မတိုင်မီကပင် ရောက်နေသော်လည်း အရှင်အရဟံ၏ကျေးဇူးကြောင့် အနော်ရထာမင်းစော လက်ထက်ကျမှပင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ပေသည်။ ထိုအခါမှစ၍ ဗုဒ္ဓဝါဒီမြန်မာဘုရင်များသည် ပါဠိဘာသာကိုလွန်စွာ အားပေးမြှောက်စား တော်မူခဲ့ကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့်ပင် ပုဂံခေတ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပါဠိ ဘာသာကို လူတိုင်းလေ့လာကြသည်။ မိန်းကလေးများပင် ထမင်းချက်ရင်း ရေခပ်ရင်း ပါဠိဘာသာကို လေ့လာလိုက်စား ကြကြောင်း အမှတ်အသားများရှိသည်။ ထိုစဉ်အခါက အချို့မိန်းမများသည်ပင် ပါဠိစာပေများကို သူတစ်ပါးအား ချပို့နိုင်ကြောင်း၊ ကျမ်းဂန် များရေးသားနိုင်ကြောင်းများလည်း မှတ်တမ်းရှိသည်။ ဝိဘတျတ္ထမည်သော သဒ္ဒါငယ်ကျမ်းကား ကျစွာ မင်းကြီး၏သမီးတော်တစ်ပါး ရေးသားသော သဒ္ဒါငယ်ကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ကျစွာမင်းကြီးသမီးတော် သံပျင်မင်းသမီး စာပေပို့ချသည်ကို ရဟန်းတော်များပင်လိုက် နာသင်ကြား ကြကြောင်း၊ တပည့်ရဟန်းတစ်ပါး သံပျင်မင်းသမီးကို စုံမက်သဖြင့် မင်းကြီးထံတောင်းဆိုးသည်တွင် ကျမ်းတစ်စောင် တစ်ဖွဲ့ရေးသားနိုင်မှ သမီးတော်နှင့်စုံဖက်နိုင်မည်ဟု ဘုရင်ကြီး အမိန့်ရှိချက်အရ နျာသကျမ်း၏ အဖွင့်ဖြစ်သော ဋီကာကျမ်းကို ပါဠိဘာသာဖြင့် ရေးသားဆက်သွင်းလေရာ ဘုရင်ကြီးကျေနပ်နှစ် သိမ့်တော်မူပြီးလျှင် သမီးတော်နှင့်ထိမ်းမြားတော်မူကြောင်း ရာဇဝင်တွင်အဆိုရှိသည်။ ယခုခေတ်တွင်ကား ပါဠိဘာသာကို ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် သာသင်ကြား လေ့လာလျက်ရှိတော့သည်။ ရှေးကလိုအားသွန်ကြိုးပမ်း လူတိုင်းမလေ့လာကြတော့ပေ။ အမှန်စင်စစ်မှာ ဗုဒ္ဓဝါဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလေ့လာသင်ယူဖို့သင့်ပေသည်။ အကြောင်းမှာ မြတ်စွာဘုရားဆုံးမ ဟောပြတော်မူချက် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် လမ်းအသွယ်သွယ် ပိဋကတ်စာပေထဲမှာပင်ရှိပေသည်။ ပိဋကတ်စာပေဟူသည် ပါဠိဘာသာ၌တည်ဆောက်ထားပေသည်။ မြန်မာဘာသာပြန်ပြန်ပြီး ပိဋကတ် စာပေတွေရှိပါသော်လည်း ပါဠိဘာသာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တတ်သိနားလည်ပြီးသူ တစ်ယောက်ကိုယ် တိုင်လေ့လာသလောက် သဘောမပေါက်နိုင်ပေ။ ထို့ပြင် မြန်မာဘာသာအတွင်းသို့လည်း သီလ သမာဓိ ပညာ စသောပါဠိဝေါဟာရများကိုတတ်နိုင် သရွေ့ထည့်သွင်း သုံးနှုန်းစေသဖြင့် ယခုအချိန်အထိပါဠိသည် မြန်မာဘာသာဟုပင် အထင်မှားလောက်အောင်တွင်ကျယ်လျက်ရှိနေပေသည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုကြသည့် ကျမ်းစာများတွင် ထိုပါဠိဝေါဟာရတွေကိုပါ ထည့်သွင်း ရေးသားထားလေ့ရှိကြသဖြင့် ပါဠိကိုမကျွမ်းကျင်က မြန်မာဘာသာကို ထိရောက်စွာတတ်မြောက် သည်ဟု ဝန်ခံရန်ခဲယဉ်းပေသည်။
ပါဠိဘာသာ၌ အသုံးပြုသည့် အက္ခရာအရေအတွက်မှာ (၄၁) လုံး ရှိ၏။ ယင်း အက္ခရာ (၄၁) လုံးကို သရ (၈) လုံးနှင့် ဗျည်း (၃၃) လုံး ဟူ၍ နှစ်မျိုး ခွဲခြားထားသည်။
သရ (၈) လုံးပြင်ဆင်
သရ (၈) လုံးတို့မှာ "အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ ဩ" တို့ ဖြစ်ကြသည်။
(ပါဠိဘာသာတွင် မပါ၊ သက္ကတသုံး သရ၊
အသံတို-ရှည် ပထမ တစုံ အ အာ
အသံတို-ရှည် ဒုတိယ တစုံ ဣ ဤ ဧ အဲ
အသံတို-ရှည် တတိယ တစုံ ဥ ဦ ဩ ဪ
ထိုသရ (၈) လုံးတွင် "အ,အာ။ ဣ, ဤ။ ဥ, ဦ" တို့သည် အခြေခံသရများဖြစ်၍ "မူလသရ" ဟု ခေါ်သည်။ "ဧ, ဩ" သရတို့ကား ထိုမူလသရများမှ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာသော သရများဖြစ်၍ "ဂုဏသရ" ဟု ခေါ်သည်။[မှတ်စု ၁] ဆိုလိုသည်မှာ "ဧ"သရသည် "အ/အာ+ဣ/ဤ"တို့ကို ပေါင်းစပ်၍ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာရသော သရဖြစ်သည်။ "ဩ"သရသည် "အ/အာ+ဥ/ဦ"တို့ကို ပေါင်းစပ်၍ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာသော သရဖြစ်သည်။
မူလသရ (၆) လုံးတွင် "အ၊ ဣ၊ ဥ" တို့သည် အသံတိုသောကြောင့် ရဿသရ (အရတို) မည်၏။ "အာ၊ ဤ၊ ဦ" တို့သည် အသံရှည်သောကြောင့် ဒီဃသရ (သရရှည်) မည်၏။ "အ၊ အာ"သည် အသံတို-ရှည် တစုံ။ "ဣ၊ ဤ"သည် အသံတို-ရှည် တစုံ။ "ဥ၊ ဦ"သည် အသံတို-ရှည် တစုံ။ ဤသို့အားဖြင့် မူလသရ (၆)လုံးမှာ အသံတို-ရှည် ၃-စုံဖြစ်သည်။
မူလသရ - အ,အာ။ ဣ, ဤ။ ဥ, ဦ။
ဂုဏသရ - (အာ)။ ဧ။ ဩ။
ဗျည်းများကို ဝဂ်ဗျည်းနှင့် အ-ဝဂ်ဗျည်းဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲထား၏။ 'ဝဂ်ဗျည်း' ဟူသည် အုပ်စုအားဖြင့် စုစည်းထားသော ဗျည်းများသာ ဖြစ်၏။ 'အ-ဝဂ်ဗျည်း' ဟူသည် အုပ်စုမှလွတ်သော ဗျည်းများကို ဆိုလိုသည်။ 'ဝဂ်ဗျည်း'မှာ ၂၅-လုံးရှိ၍ 'အ-ဝဂ်ဗျည်း'မှာ ၈-လုံးရှိသည်။
ယင်းဗျည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။
ဝဂ်ဗျည်း ၂၅ လုံးပြင်ဆင်
အသံဖြစ်ပေါ်ရာ အရပ်များ (ဌာန်)
↑ ပါဠိဘာသာ၌"မူလသရ၊ ဂုဏသရ"ဟူ၍ သရအဆင့် ၂-ဆင့်သာရှိ၏။ သက္ကတဘာသာ၌ကား "အဲ၊ အော် (ဪ)"ဟူ၍ တတိယဆင့် အဖြစ် ဝုဒ္ဓိသရ ထားရှိသည်။ "အဲ"သည် 'ဧ'၏ ဝုဒ္ဓိသရဖြစ်၍၊ "အော်" (ဪ)သည် 'ဩ'၏ ဝုဒ္ဓိသရ ဖြစ်သည်။
↑ Nagrajji (2003) "Pali language and the Buddhist Canonical Literature". Agama and Tripitaka, vol. 2: Language and Literature.
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Pali"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Hazra, Kanai Lal. Pāli Language and Literature;asystematic survey and historical study. D.K. Printworld Lrd., New Delhi, 1994, page 19.
↑ Hirakawa, Akira. Groner, Paul. A History of Indian Buddhism: From Śākyamuni to Early Mahāyāna. 2007. p. 119
↑ Oberlies, Thomas (2001). ပါဠိ: ထေရဝါဒ တိပိဋကသုံး ဘာသာစကား၏ သဒ္ဒါ. အိန္ဒိယ ဘာသာဗေဒနှင့် တောင်အာရှ လေ့လာရေးကျမ်း၊ အတွဲ ၃. ဘာလင်: Walter de Gruyter. နှာ. ၆. ISBN 3-11-016763-8. "Pāli asaMIA language is different from Sanskrit not so much with regard to the time of its origin than as to its dialectal base, sinceanumber of its morphonological and lexical features betray the fact that it is notadirect continuation of Ṛgvedic Sanskrit; rather it descends fromadialect (oranumber of dialects) which was (/were), despite many similarities, different from Ṛgvedic."
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ ၇.၄ ၇.၅ အခြေပြုပါဠိသဒ္ဒါ၊ ဦးမြင့်ဆွေ (မဟာဝိဇ္ဇာ - လန်ဒန်) 
See entries for "Pali" (written by K. R. Norman of the Pali Text Society) and "India--Buddhism" in The Concise Encyclopedia of Language and Religion, (Sawyer ed.) ISBN 0-08-043167-4
Müller၊ Edward (1995) [First published 1884]။ Simplified Grammar of the Pali Language။ Asian Educational Services။ ISBN 81-206-1103-9။
Silva၊ Lily de (1994)။ Pali Primer (first ed.)။ Vipassana Research Institute Publications။ ISBN 81-7414-014-X။
Warder၊ A. K. (1991)။ Introduction to Pali (third ed.)။ Pali Text Society။ ISBN 0-86013-197-1။
American National Standards Institute. (1979). American National Standard system for the romanization of Lao, Khmer, and Pali. New York: The Institute.
Andersen၊ Dines (1907)။ A Pali Reader (PDF)။ Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag။ p. 310။
Perniola, V. (1997). Pali Grammar, Oxford, The Pali Text Society.
Collins, Steven (2006). A Pali Grammar for Students. Silkworm Press.
Gupta, K. M. (2006). Linguistic approach to meaning in Pali. New Delhi: Sundeep Prakashan. ISBN 81-7574-170-8
Hazra, K. L. (1994). Pāli language and literature:asystematic survey and historical study. Emerging perceptions in Buddhist studies, no. 4-5. New Delhi: D.K. Printworld. ISBN 81-246-0004-X
Müller, E. (2003). The Pali language:asimplified grammar. Trubner's collection of simplified grammars. London: Trubner. ISBN 1-84453-001-9
Russell Webb (ed.) An Analysis of the Pali Canon, Buddhist Publication Society, Kandy; 1975, 1991 (see http://www.bps.lk/reference.asp Archived3June 2013 at the Wayback Machine.)
Soothill, W. E., & Hodous, L. (1937). A dictionary of Chinese Buddhist terms: with Sanskrit and English equivalents andaSanskrit-Pali index. London: K. Paul, Trench, Trubner & Co.
Pali Text Society, London. The Pali Text Society's Pali-English dictionary. Chipstead, 1921-1925.
Reconstruction of Ancient Indian sound clusters on the basis of Pali sounds (according to "Grammatik des Pali" by Achim Fahs)
Buddhadatta Mahāthera, A. P. (1958). Concise Pāli-English Dictionary.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါဠိ&oldid=743626" မှ ရယူရန်
၁၅ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။